Osimiri kacha mma na Atens | Njem zuru oke
Greece ọ bụ otu ihe ahụ maka osimiri, oge ọkọchị, ezumike ezumike ma ọ bụ ịgagharị n'etiti mkpọmkpọ ebe ochie. Ihe a na - emebu bu ima isi obodo wee wụ na otu n’ime agwaetiti ya, mana ọ bụrụ n’anyị anọghị n’Atens na gburugburu ya, enwekwara oke osimiri.
Yabụ, taa ka anyị kwuo maka ya osimiri kacha mma na Athens.
1 Osimiri Atens
2 Osimiri ndị dị n'ụsọ oké osimiri ndịda Athens
3 Osimiri ndị dị na ndịda ọwụwa anyanwụ nke Athens, na nso Sounio
4 Osimiri ndịda ndịda ọwụwa anyanwụ Athens dị nso na Maraton
Athens na-asacha site na mmiri nke Oke Osimiri Aegean ya mere, anyị na-ahụkwa osimiri mara mma ma dị nso na nso karịa osimiri nke agwaetiti. Ọ bụghị na ha ga-ewepụ ha, ezumike na Gris ga-abụ ntakịrị ngwụrọ na-enweghị obere njem gaa agwaetiti ahụ, mana ọ bụrụ na ịnweghị oge ma ọ bụ na ị gafere isi obodo Gris, mgbe ahụ osimiri ndị a ga-enye ị nwere afọ ojuju.
Eziokwu bụ na ụsọ mmiri ndị dị nso na Atenas dị ọtụtụ, ma e nwere site na ndị dara oke ọnụ ma hazie nke ọma maka oke osimiri dị obere, nwere obere aja na mmadụ ole na ole. Kwesịrị, inyocha na Ihe niile ga-adabere na oge n'efu ị nwere yana ole ị ga - enwe ma ọ bụ chọọ ịpụ na etiti obodo.
Luckily, ọ bụrụ na ị na-eche banyere mma mmiri na nso obodo buru ibu azịza ya bụ na ha dị ọ dị ezigbo mma, ma ọ dịkarịa ala nke ahụ bụ ihe European Environment Agency na-ekwu.
Osimiri ndị dị n'ụsọ oké osimiri ndịda Athens
Osimiri ndị a ha nọ n'akụkụ nke ọzọ nke Attica ha dịkwa mma ọ bụrụ na ịnweghị oge buru ibu ma ọ bụ na ịnweghị ụgbọ ala. N'ebe ndịda osimiri ndị a ọ dị mfe iji tagzi, bọs ma ọ bụ tram. Ka anyị hụ, ebe a bụ osimiri Astir, dị oke mma.
La Osimiri Astir Ọ bụ otu n'ime elu osimiri ndị Atens. Ọ dị na mpaghara mara mma nke Vouliagmeni na n'ezie ọ nwere ọrụ niile. Echere m, ị nwere ike mgbazinye sunbeds, mesịa na ọbụna nwee njikọta WiFi. Na ire nri na ihe ọ drinkụ drinkụ na-akọ ụkọ. N'ezie, ọ bụghị osimiri dị ọnụ ala ma ị ga-akwụ ụgwọ n'ọnụ ụzọ: Euro 25 na izu, euro 40 na ngwụsị izu, kwa okenye.
Ee, ọnụahịa ahụ dị elu ma na ngwụsị izu na oge enwere ọtụtụ mmadụ, ma eleghị anya, anwụ na-acha ma ọ bụ nche anwụ adịghị. Nwere ike tinye akwụkwọ, ee, mana ọ ka siri ike. Osimiri Astir bara uru ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịhụ ma nọrọ n'etiti ndị mara mma na ndị mara mma. Ọ na-emepe na 8 nke ụtụtụ ma na-emechi na 9 n'abalị, ma ọ bụrụ na ịnọ na nri abalị na ụlọ oriri na ọ restaurantụ restaurantụ ị nwere ike ịnọ ruo etiti abalị.
Osimiri ọzọ bụ Kavouri osimiri, n'otu agbata obi nke Vouliagmeni. Osimiri dị n'ụsọ mmiri nke osisi pine na ụlọ ndị dị oké ọnụ. E nwere ụfọdụ ájá ma ị nwere ike igwu mmiri, ọ bụ ezie na ngalaba kachasị ewu ewu bụ Megalo Kavouri, nke dị n'akụkụ ọdịda anyanwụ, yana nche anwụ na anwụ na-akwụ ụgwọ kamakwa ebe ndị nweere onwe ha.
Osimiri Kavouri bụ ájá ọlaedo ma nwee mmiri dị jụụ nke ọma n'oké osimiri. Banye ebe ahụ esighi ike n'ihi na ị nwere ike were metro gaa ọdụ Elliniko ma si ebe ahụ bọs 122. Luckily ọ nwekwara nri na ihe ọ drinkụ drinkụ ahịa.
El Ọdọ Vouliagmeni Ọ bụ usoro ọdịdị ala dị egwu na-esote oke osimiri ahụ ma nwee osimiri. Mmiri dị nnuHa na-abịa n'okpuru ndị gafere okpuru ugwu ahụ, n'akụkụ osimiri ahụkwa, ha nwere ebe a na-anọ anwụ anwụ na nche anwụ. Mmiri mmiri dị n'akụkụ ikpere mmiri ahụ adịghị omimi, mana n'akụkụ nke ọzọ ọ maghị omimi, ya mere kpachara anya. Dị ka ọ bụ ọdọ ke ofụri ofụri mmiri bụ ntakịrị ọkụ karịa oké osimiri otú ahụ na oge ritere ewu ewu.
Have nwere n'aka gị ọtụtụ ihe eji enyere ndụ aka, enwere a mmanya mmanya ọ dị mma nke ukwuu, mepee ụbọchị niile, ime ụlọ na-agbanwe, mmiri ozuzo, ịnweta oche ọlụsị na ụlọ oriri na ọ restaurantụ .ụ. Mgbe anyanwụ dara ntakịrị ma ọ na-ada jụụ, egwu na-amalite ịkpọ. N’ozuzu ya, ọ bụ osimiri dị jụụ karịa nke osimiri.
Ọ bụrụ na-amasị gị igwu mmiri n'oké osimiri mgbe ahụ gị osimiri bụ Osimiri Thalassea. Ọ dị na mpụga Voula, n’ebe ndịda nke Athens, ma nwee ọtụtụ ọrụ. Nwere ike ịgbazite oche na nche anwụ na ọnụahịa dị mma yana n'oge ọkọchị, a na-enwekarị oriri na nkwari na ndị ọbụ abụ ama ama.
Na ụbọchị izu ụka ị na-akwụ ụgwọ ọnụ ụzọ nke 5 euro kwa isi na 6 na ngwụsị izu. Nwere ike iru ebe ahụ site na njem ọha na eze, ma ọ bụ site na iwere metro na ịpụ ọdụ ọdụ Elliniko wee banye bọs 122 ma ọ bụ buru tram ruo ọdụ ya bụ Asklipio Voulas.
La Osimiri Yabanaki Ọ dị na mpaghara Varkiza ma nwee ụdị ogige ntụrụndụ n'ihi na ọ na-enye ihe karịrị naanị osimiri. Enwere nri ngwa ngwa, kọfị, ihe ọ drinksụ drinksụ, nri mmiri, nri ndị Greek na-ahụkarị ma ị nwere ike ịme ihe ọtụtụ egwuregwu mmiri, site n'ụgbọ mmiri na-atọ ụtọ ruo na mmiri na-egwu mmiri, ikuku ikuku na-efegharị ma ọ bụ ịkwọ ụgbọ mmiri.
Site na Mọnde ruo Fraịde ọnụego mbata bụ euro 5 mana ọnụọgụ ahụ gụnyere olulu anyanwụ na nche anwụ. Na Satọde na Sọnde ọnụ ụzọ bụ euro 6 mana ị ga-akwụrịrị euro 5 ọzọ maka nche anwụ, belụsọ na ịbatara mgbe elekere asaa nke abalị bụ n'efu.
Kedu ka esi aga n'ụsọ osimiri a? Nwere ike iji metro ọzọ gaa ọdụ Ellinko ma site na ebe ahụ bọs 171 ma ọ bụ 122.
N'aka nke ọzọ, Osimiri Edem dị nso na Atens, n’agbata ógbè Alimos na Palio Faliro. Ọ bụ osimiri a haziri ahazi, ya na mbadamba na ndị mmadụ na-eje ije na nke ahụ na-akpọrọ gị gaa na obere osimiri ndị ọzọ dị nso, nnukwu osisi chess na ọrụ dị iche iche. Ọ dị mfe iji tram, na-apụ na ebe nke otu aha.
Osimiri ndị dị na ndịda ọwụwa anyanwụ nke Athens, na nso Sounio
Ebe kachasị dị n'akụkụ ndịda nke peninshula nke Attica bụ Sounio, ebe mara mma Templelọ Poseidon, nke a ma ama na oge mgbede. Mana ruo mgbe ị ruru ebe ahụ, na kilomita iri atọ na ise nke ụsọ oké osimiri, e nwere ọtụtụ osimiri. Ee n'ezie, ị chọrọ ụgbọ ala iji gakwuru ha.
La osimiri sounio O nwere echiche di egwu banyere ulo uku a ma ama, obu osimiri a haziri ahazi na o nwere otutu oru. E nwekwara ndi mmadu na ndi mmadu nwere onwe ha. Mmiri ahụ sara mbara n'ihi ya, ọ kwesịrị ka ị gaa ebe elekere elekere elekere elekere. N'ezie, kpachara anya na oge n'ihi na n'oge okpomọkụ dị elu oge ọ na-esiri ike ịpasa na mpaghara ụgbọ ala pụrụ iche. Emechaa, enwere ụlọ nri ebe ị nwere ike iri azụ na azụ.
La Kape osimiri mara mma ma nwee a echiche dị egwu banyere Aegean. E ji obere obere okwute na mmiri dị ọcha mee ala mmiri. N'ezie, ha na-enweta ngwa ngwa ka ị nwee ike ịmata etu esi egwu mmiri. Dika osimiri a amarawo na nso nso a, otutu mmadu kariri Saturday na Sọnde. You nwere ike ịzụta nri na ihe ọ drinkụ drinkụ ebe a? Enwere ụlọ nri, mana ọ naghị emeghe oge niile ka ị wee weta ihe gị.
N'ikpeazụ, ọ bụrụ n'ịchọrọ ịga ije ọtọ ma ọ bụrụ na ị gafee obere, ị ga-erute n'akụkụ osimiri ọzọ, obere, nke bụ ebe a na-eme ya. ịgba ọtọ.
La Osimiri Asimakis Amabeghị ya dịka nke gara aga, mana ọ bụrụ n'ịchọrọ inyocha ụlọ nsọ ahụ ntakịrị na-enweghị ịnọ n'ụsọ osimiri dịkarịrị nso, nke a bụ nhọrọ. O nweghi otutu ndi mmadu, ụzọ Lavrio si Sounio, na o nwere otutu aja. Ee n'ezie, enweghị nche anwụ, yabụ ọ bụrụ na ịnweghị nke ọ nwere ike ọ gaghị adabara gị.
Osimiri Asimakis nwere ụlọ oriri na ọ restaurantụ restaurantụ ma dị otu elekere site na Atens.
Osimiri ndịda ndịda ọwụwa anyanwụ Athens dị nso na Maraton
Nke a bụ otu ọzọ n'ụsọ osimiri ndịda ọwụwa anyanwụ Athens na kwa ọ dị mkpa ịnwe ụgbọ ala n’ihi na otu ahụ ị ga-esi garuo ebe ahụ ọsọ-ọsọ na mfe. Agha Marathon a ma ama mere ebe a, yabụ ị nwere ike ijikọta akụkọ ihe mere eme na oge ezumike.
Osimiri mbụ na ndepụta bụ Osimiri Schinias, dị oke oke, dị na njedebe nke apiti nke bụ mpaghara echekwara na ọhịa pine, dị naanị 3 kilomita site na Tomb nke Maratón. Igwu ebe a dị mma ma nwekwa ụlọ ebe amị dị nso.
Osimiri nwere akụkụ ndị a haziri ahazi karịa ndị ọzọ, ya mere ị nwere ike ịhọrọ isoro ndị ọzọ ma ọ bụ pekarịa. Ọ naghị adị mfe ịnweta site na njem ọha na eze na ụgbọ ala ọ na-ewe ogologo oge 50.
La Osimiri Dikastika bụ nhọrọ ọzọ ma ọ bụrụ na ị na-achọ ihe ọzọ reclusive na-ewu ewu. Ọ dị n'akụkụ Osimiri Schinias n'akụkụ o nweghị ájá, kama okwute. Ọ bụ ebe mara mma, nke nwere ọtụtụ ụlọ mara mma na agbata otu aha, mana n'ezie, enweghị nche anwụ na-edina ala nwere ike ọ bụ ntakịrị ihe iru ala ...
Ọfọn, rute ugbu a ụfọdụ n'ụsọ osimiri kachasị mma na Atens, mana n'ezie ọ bụghị naanị ha. Anyị nwekwara ike ịkpọ aha ya osimiri Lagonissi, Varkiza, Glyfada, Akanthus, Legrena, Flisvos, Yabanaki, Krabo, Niriides ma ọ bụ ebe mara mma nke Limanakia.
Iji na-enwe Osimiri Athens buru n'uche na mgbe niile enwere ndị pere mpe na ụbọchị izu ụka, ihe dị ka ndị njem nleta anyị nwere ike iji nke ọma, na ọkọlọtọ oroma pụtara na enwere ndị nchekwa ndụ naanị n'oge ụfọdụ yana ọkọlọtọ na-acha uhie uhie pụtara na ọ nweghị, na n'ụsọ osimiri na marina, a na-enwekarị paseeji na mmiri maka ndị na-egwu mmiri na ụgbọ mmiri Kpachara anya na nke ahụ, yana na n'agbata ọnwa Julaị na Ọgọstị, ifufe dị ike ka enwere ike ịnwe oke mmiri.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Njem zuru oke » Osimiri kacha mma na Atens